पत्रकारले देखाएनन् दुर्घटना बीमामा चासो, थाहा पाउनुस् बीमा कसरी गर्ने – Media Kurakani
December 28th, 2016 Media Kurakani Media News
सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्यमा २०७२ मंसिर १० गतेदेखि पत्रकार दुर्घटना बीमा सुरु गर्‍यो।
तर सुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्घटना बीमा गर्न पत्रकारहरु इच्छुक देखिएका छैनन्। पत्रकारको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सुरु भएको पत्रकार दुर्घटना बीमामा स्वयं पत्रकारहरुले नै चासो नदिएका हुन्।
महासंघले सेवा सुरु गरेको एक वर्ष भैसक्दा पनि अहिलेसम्म १ हजार ४७१ जना पत्रकारले मात्र दुर्घटना बीमा गरेका छन्। जबकि नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य नै १० हजार ७७ छन्। सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाउने पत्रकारको संख्या यो भन्दा धेरै छ।
बीमा गर्न सजिलो होस् भनेर पत्रकार महासंघले ७४ जिल्लामा बीमा गर्ने सुविधा मिलाएको छ। पत्रकार संख्या थोरै भएकोले मनाङमा पत्रकार महासंघको जिल्ला शाखा छैन। जिल्ला शाखा स्थापनाका लागि कम्तिमा १५ जना सदस्य हुनुपर्छ।
पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७० बमोजिम श्रमजीवी पत्रकारका लागि गरिएको यो दुर्घटना बीमाअन्तर्गत चोटपटकको कारणबाट ४५ प्रतिशतभन्दा बढी अशक्तता भएकोमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र दुर्घटनबाट उत्पन्न उपचारबापत लाग्ने खर्चको हकमा बिलबमोजिम बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्मको वास्तविक खर्च व्यहोरिने छ।
बिमित व्यक्तिको मृत्यु भएमा, स्थायीरूपले पूर्ण वा आंशिकरूपमा अशक्त भएमा, दुर्घटनाको कारण उपचार गराउनुपर्ने भएमा बिमितले लाभ प्राप्त गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।
बीमा योजनाअन्तर्गत प्रत्येक बिमित पत्रकारको बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारी कोषबाट र २५ प्रतिशत नेपाल पत्रकार महासंघमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिबाट व्यहोरिएको छ। यसअन्तर्गत प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रिमियम ३३९ रुपैयाँ मध्ये सरकारी कोषबाट २५४ रुपैयाँ ७५ पैसा र महासंघबाट ८४ रुपैयाँ ७५ पैसा बेहोरिनेछ।
कामको शिलशिलामा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा घाइते भएर औषधी उपचारमा लाग्ने खर्च बीमामा समेटिएको छ।
जस्तो पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट रासस रुपन्देहीमा कार्यरत पत्रकार भरत केसी लाभान्वित भए। २०७३ जेठ १८ गते सडक दुर्घटनामा घाइते भएका केसीलाई दुर्घटनापश्चात औषधीउपचार वापत एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले दुई लाख भुक्तानी गरेको हो।
किन चासो छैन पत्रकारलाई बीमाबारे?
अहिलेसम्म १ हजार ४७१ जना पत्रकारले मात्र दुर्घटना बीमा गरेका छन्। महासंघले बीमाको ब्यवस्था ल्याएको पहिलो वर्ष ५५४ जना र यो वर्ष हालसम्म ९१७ जना पत्रकारले मात्र दुर्घटना बीमा गरेका छन्। उक्त तथ्याकं महासंघले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम हो।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट पत्रकारले बीमाका लागि आवश्यक कागजात पुर्‍याउन नसक्दा र पत्रकारमा तदारुकता नहुँदा अपेक्षा गरिएबमोजिम बीमा कार्यक्रममा पत्रकारहरु सहभागी हुन नसकेको बताउँछन्।
‘बीमा सुविधा लिने प्रावधानमा पत्रकार महासंघको सदस्य सँगसँगै सूचना विभागको प्रेस पास पनि अनिवार्य छ। धेरैमा प्रेस पास लिन नसक्दा डकुमेन्ट पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था छ’, अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘व्यक्ति आफूले पनि यो सुविधाबाट लाभान्वित हुन्छु भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि तदारुकता नदेखाउने समस्या छ।‘
अध्यक्ष विष्टकै कुरा मान्ने हो भने पनि पत्रकारले जानकारी अभावले भन्दा पनि मतलब नगरेर बीमामा सहभागी नभएको देखिन्छ। अर्कोतिर न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरी नियुक्तिपत्र दिने प्रावधान मिडियाहरुले पालना नगरेकोले पनि पत्रकार बीमामा सहभागी हुन सकेका छैनन्।
बीमा गर्ने प्रकृया के छ?
दुर्घटना बीमा गर्न तपाईँले सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यस्तै तपाईँले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। अर्थात, सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाउनुभएको छैन र महासंघको सदस्याता पनि लिनुभएको छैन भने बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुहुन्न। सूचना विभागबाट प्रेस पास लिन के गर्नुपर्छ अनि महासंघको सदस्यता लिन के गर्नुपर्छ थाहा छैन भने पढ्नुस्।
पत्रकार दुर्घटना बीमाको लागि नेपाल पत्रकार महासंघको नजिकको कार्यालयमा निम्न विवरण पठाउनु पर्छः
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी प्रत्रकारले बीमा गर्न प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी एक थान।
नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक थान।
बीमा गर्ने पत्रकारको नामावली र बिमित योगदान स्वरुप ८४ रुपैयाँ ७५ पैसा।
सरकारी मिडियामा कार्यरत पत्रकारको हकमा माथि उल्लेखित विवरण सहित १ सय ६९ रुपैयाँ ५० पैसा पठाउनु पर्नेछ।
सूचना विभागले पत्रकार दुर्घटना बीमामा सहभागी हुन पत्रकारलाई अनुरोध गर्दै सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ।
अब त बीमा गर्ने कि?
Tags Federation of Nepali Journalists FNJ Nepal Journalist Accident Insurance Mahendra Bista
खोज पत्रकारिता गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ खोपकेमा ‘स्टोरी पिच’ गर्ने तरिका »
« ‘पत्रकार महासंघले नयाँ सदस्यको सूची लुकायो’
[…] महिनाअघि पत्रकार बिमाबारे एक सामग्री तयार पार्दासम्म महासंघमा १० हजार ७७ […]